Ngwa ngwa laptọọpụ akwụghị ụgwọ: chaja, batrị, mkpuchi ...
Laptọọpụ bụ ngwaahịa dị mkpa na ndụ ọtụtụ nde mmadụ. Ha abụọ mgbe a na-arụ ọrụ, na-agụ akwụkwọ, ma ọ bụ maka ntụrụndụ. Site na ekele maka laptọọpụ anyị nwere ohere ịnweta ụdị ọdịnaya (egwu, vidiyo, foto) na ọtụtụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu. Na mgbakwunye, ọ nwere uru na anyị nwere ike iburu ya mgbe niile. Ọ bụ ezie na, iji nwetakwuo ya, anyị kwesịrị inwe ụfọdụ ngwa.
Ọnụọgụ ngwa dị maka laptọọpụ amụbaala ka oge na-aga. Ekele dịrị ha, ọ ga-ekwe omume iji kọmpụta ahụ nke ọma, nwee ntụsara ahụ ma ọ bụ mejupụta ụfọdụ adịghị ike ha. Ya mere, n'okpuru ebe a na-kwuru nke laptọọpụ ngwa ndị kasị mkpa.
Otu n'ime ngwa kachasị mkpa maka laptọọpụ bụ aka uwe. Ihe mkpuchi ahụ dị mkpa, n'ihi na ọ ga-enyere anyị aka ichebe kọmputa mgbe niile. Nke mere na mgbe anyị debere ya ma ọ bụ buru ya ebe, a ga-echebe ya pụọ ​​na ntu, ọdịda ma ọ bụ unyi. Ya mere, ọ dị mkpa ịnweta mkpuchi mgbe niile.
Ụdị ihe mkpuchi dị iche iche, n'ihe gbasara ihe. Ụfọdụ na-eji akwa akwa, ndị ọzọ na-eji akpụkpọ anụ na ndị ọzọ bụ plastik. Ihe dị mkpa na aka uwe laptọọpụ bụ na ha na-echebe ma na-eme ka ọ ghara ịdaba na ngwaọrụ ahụ, na-egbochi ya imebi.
Chọpụta nke kacha mma aka uwe laptop
Ngwa ọzọ na-adịkarị na mkpa maka laptọọpụ. Akpa azu azu ga-enye anyi ohere iburu laptop anyi ebe obula anyi choro. Ọ na-arụ ọrụ yiri nke ahụ na mkpuchi, nke bụ iji chebe ya mgbe niile. Ọtụtụ ụdị na-ebupụta akpa azụ azụ, nwere ụdị ọpụrụiche emebere ka ejiri ya na laptọọpụ.
Mgbe ị na-ahọrọ akpa azụ, e nwere ụdị ihe dị iche iche (dị ka mkpuchi), ọ bụ ezie na nha na nhazi ga-adabere na onye ọrụ ọ bụla. Nakwa nke a ga-eme, n'ihi na enwere ike ịnwe ndị ọrụ na-agaghị ewepụ laptọọpụ ha n'ụlọ ọtụtụ oge.
Nke a bụ ndị kacha mma akpa akpa laptop
Emebere ntọala jụrụ oyi ka etinye ya n'okpuru laptọọpụ, ka ọ ghara ịdị ọkụ nke ukwuu. Ọ bụ ihe ọtụtụ ndị na-eji ma ọ bụrụ na laptọọpụ ha nwere mmasị na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ọ nwere ike ime karịsịa na laptọọpụ egwuregwu, nke a na-edozi usoro na-achọ ọtụtụ ihe site na processor. Na ntọala a na-enwekarị otu ma ọ bụ karịa Fans, nke ga-enyere aka belata okpomọkụ.
Na laptọọpụ ndị na-eme usoro na-achọsi ike ma ọ bụ ụfọdụ ndị meworo agadi, ọ nwere ike ịbụ ngwa dị mkpa. Nhọrọ ahụ dị oke obosara, yana ọdịiche dị na ọnụ ọgụgụ nke Fans ma ọ bụ nha. Ọ dị mkpa ijide n'aka na nha dabara na laptọọpụ.
Jiri ihe ndị a mee ka laptọọpụ gị dị jụụ ntọala jụrụ oyi
Ihe nkwụnye laptọọpụ bụ otu n'ime ngwa eji eme ihe. Emebere ha iji bulie ọnọdụ nke laptọọpụ mgbe etinyere ya n'elu, dị ka tebụl. Ihe kpatara eji otu eme ihe nwere ike ịdị iche iche. Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa na akwụkwọ, ọ nwere ike ịdị mma, nke mere na ọ na-ewe obere ohere na tebụl ahụ. Ọzọkwa mgbe ị na-eri ọdịnaya, ka ịnwe ya n'ogo dị mma ka ịlele ya. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ihe karịrị otu kọmputa, ị nwere ike ime ka usoro a dịkwuo mfe.
N'ime ụdị nkwado enwere ọtụtụ ụdị. Ekwesịrị iburu n'uche na e nwere ụfọdụ ndị edoziri (ha anaghị emegharị), ebe ndị ọzọ na-ekwe ka a gbanwee elu. Ya mere, dabere n'ojiji nke ịchọrọ ime, ị ga-eburu n'uche nke a, ịhọrọ nke kacha mma maka gị. Ọnụ ahịa na-agbanwekwa, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọta nkwado dị mma, nke na-eguzogide ọgwụ, na ọnụahịa dị mma.
Jiri ndị a na-eji laptọọpụ gị nke ọma brackets
chaja zuru ụwa ọnụ
Laptọọpụpụ na-eji chaja na-abịa mgbe niile. Ọ bụ ezie na, ọ ga-ekwe omume na mgbe obere oge gasịrị, ọ ga-emebi, furu efu ma ọ bụ nwee nsogbu. Ya mere, iji chaja zuru ụwa ọnụ bụ nhọrọ dị mma. Ọ bụ chaja na-arụ ọrụ na ụdị kọmpụta niile. Enwere naanị akụkụ abụọ ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ chaja: amperage na njikọ.
Dabere na nha nke laptọọpụ, amperage ọ na-eji dị iche. Ọ na-apụtakarị na ntuziaka ma ọ bụ n'okpuru ya. Ya mere, zụta chaja dabara na nke a. Njikọ ahụ bụ akụkụ ọzọ ị ga-atụle, n'ihi na ọ dị iche site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ. Ọ bụ ezie na enwere chaja na-abịa na isi dị iche iche, nke ga-enye gị ohere iji ya na ụdị laptọọpụ niile.
Ewepụla chaja gị ma ị nweghị ike iji laptọọpụ, zụta otu n'ime ndị a chaja laptop zuru ụwa ọnụ
Otu n'ime ngwa kachasị mma maka nchekwa laptọọpụ. Ọ bụ ngwa e mere ka e jiri ya mee ihe n'ebe ọha na eze dị, dị ka cafes ma ọ bụ ọba akwụkwọ. Ya mere, mgbe ị ga-anọpụ nwa oge, tinye mkpọchi n'otu ọdụ ụgbọ mmiri nke laptọọpụ ma kechie ya na tebụl ma ọ bụ ihe a na-apụghị ibugharị. Ọ ga-egbochi ya izu ohi. Ọ na-arụ ọrụ dị ka mkpọchi nkịtị, yana igodo ya.
A na-ejikarị eriri igwe na-ejikọta ihe mgbochi ahụ, nke na-adịghị agbaji ma ọ bụ nwee ike ịkpụ. Ogologo ahụ na-agbanwe agbanwe, yabụ enwere ike ịnwe ndị chọrọ ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ, mana ọrụ ahụ bụ otu ihe n'ọnọdụ niile. Ngwa dị mkpa maka nchekwa.
Ọ bụrụ na anyị nwere mkpọchi mkpuchi, mgbe ahụ, eriri nchekwa dị mkpa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọtụtụ, mkpọchi na-abịa na eriri nchekwa. Ọ bụ eriri na-ejikọta na laptọọpụ na ihe, iji gbochie izu ohi n'ebe ọha na eze. Ụfọdụ ụdị na-aga maka eriri ogologo, ndị ọzọ maka eriri mkpụmkpụ.
Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ niile ha bụ eriri ígwè, nke mere na ha enweghị ike ịgbaji ma ọ bụ bee n'oge ọ bụla. Mgbe ị na-ejikọta ha na laptọọpụ, enwere igodo, nke mere na ọ bụ naanị onye nwe ya ga-enwe ike imeghe ya n'ọnọdụ ọ bụla. Ọ bụ usoro yiri nke mkpuchi mkpuchi.
Ọ bụrụ na laptọọpụ gị bara nnukwu ego ma ọ bụ nọ n'ebe dị mfe ịnweta, zụta a mkpọchi na eriri nchekwa maka laptọọpụ iji hụ na ya
Ngwa maka ijikọ laptọọpụ na TV
A bịa na ijikọ laptọọpụ na TV gị, enwere ọtụtụ nhọrọ. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụdị eriri na-eme ka nke a kwe omume. Nhọrọ ga-adabere na ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa ọ bụla, yana na telivishọn. N'ihi na dabere na ihe nlereanya, ha nwere ike ịdị iche. The cables ndị dị na nke a bụ:
HDMI: Ọ bụ njikọ na-enye ohere ọdịyo na vidiyo site n'otu eriri
VGA / RGB: Ọ bụ ụdị njikọ maka ihe nleba anya kọmputa (ọ na-ebunye vidiyo naanị)
DVI: Ọ bụkwa njikọ maka onye nleba anya, na nke a ka ọ dị ugbu a na nke ka mma, n'agbanyeghị na ọ na-ebufe vidiyo.
Ọ ga-ekwe omume ịzụta eriri ga-enye gị ohere ijikọ telivishọn na laptọọpụ gị n'ụzọ dị mfe. N'ime nhọrọ ndị a, nke kachasị mma ga-abụ HDMI, ka ihe niile dị na ihuenyo kọmputa wee hụ ma nụ na telivishọn. Ọ bụ ezie na ọ ga-adabere n'ihe ịchọrọ ime na nke a mgbe ị na-ahọrọ eriri.
Chọta ebe a niile eriri iji jikọọ laptọọpụ na TV
Ọtụtụ laptọọpụ ka e bu n'obi were maka egwuregwu. Ya mere, na nke a, a chọrọ ngwa ndị kwesịrị ekwesị maka ọrụ a. Ngwa dị mkpa na nke a bụ òké egwuregwu. Ụmụ oke egwuregwu na-apụta maka inwe ụdị dị iche iche, yana ọkụ RGB, yana inwe bọtịnụ enwere ike ịhazi.
Enwere ọtụtụ ụdị oke dị taa. Nhazi ahụ dịgasị iche site n'otu ika gaa na nke ọzọ, mana ha na-enwekarị akụkụ jikọrọ ya. Ya mere, ọ dabere na mmasị na mmefu ego nke onye ọ bụla mgbe ị na-ahọrọ nke dabara onye ọrụ.
Ọ bụrụ na-amasị gị igwu egwu, ị nwere ike ghara uche a egwuregwu òké na nchịkọta ngwa ngwa laptọọpụ gị
Laptọọpụ nwere akara aka kama inwe òké. Maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ naghị adị mma iji otu. N'ihi nke a, ha na-amalite na òké ikuku, nke bụ nhọrọ dị mma karịa. Òké ikuku enweghị eriri, kama ọ na-ejikọta na kọmputa site na Bluetooth ma ọ bụ ugboro redio. Nke na-eme ka ọ dị mfe ijikọ na laptọọpụ mgbe niile.
Ọtụtụ ụdị nwere oke ikuku ikuku dị, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Ọrụ ahụ bụ otu n'ime ha niile, ọnụ ahịa ya na-abụkarịkwa otu. Ọ gwụla ma ị na-achọ oke oke dị elu, nke na-enwekarị ergonomic na atụmatụ adịchaghị mma. Maka ndị ga-eji ya eme ihe nke ukwuu, ọ nwere ike ịdị mkpa ịnweta otu n'ime ụdị a.
Chezọ trackpad wee zụta a wireless òké maka laptọọpụ gị
Ahụigodo dị na laptọọpụ nwere ike ọ gaghị adị mma maka ụfọdụ ndị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere obere laptọọpụ. Ya mere, ahụigodo ikuku bụ ihe nwere ike inye aka n'ọnọdụ ndị a. Ọrụ a yiri nke òké ikuku, nke na-ejikọ na kọmputa site na Bluetooth.
Nke a na-enye gị ohere ịnweta ahụigodo ahụ n'ọnọdụ dị mma, na-enweghị ijide laptọọpụ. Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere uru na ha na-ekwe ka a na-ebu ha mgbe niile na laptọọpụ, nke kachasị mma maka ndị ọrụ. Ọnụ ahịa na-agbanwe agbanwe, dabere na ika. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha na-eji òké ikuku, yabụ ị nwere ihe niile.
Ndị a bụ ahụigodo ikuku kacha mma
Ị chọrọ mkpọchi ma ọ bụ eriri nchekwa maka laptọọpụ gị? Eji ntuziaka ịzụrụ ihe emelitere gbochie izu ohi kọmputa gị.
Chaja enwere ike ibugharị zuru ụwa ọnụ
Ị chọrọ chaja laptop zuru ụwa ọnụ? Anyị na-enyere gị aka ịhọrọ ụdị nke dabara na kọmputa gị n'ime ntuziaka ịzụrụ ihe emelitere
Otu esi ehichapu laptọọpụ laptọọpụ
Na-eche maka iji nhicha nwa ma ọ bụ mmanya na-ehicha ihuenyo laptọọpụ gị? Mmejọ na-egbu egbu. Nke a ka ị ga-emerịrị iji sachaa ya nke ọma
Jikọọ laptọọpụ na TV
Ị chọrọ jikọọ laptọọpụ na TV? Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ iji eriri na enweghị eriri. Jikọọ PC ma ọ bụ Mac gị na TV.
Ihe nkwụnye laptọọpụ
Na-achọ nkwụnye laptọọpụ? Tinye wee họrọ n'ime ụdị kachasị mma site na iji ntuziaka ịzụrụ ihe emelitere.
Ebe nju oyi nwere ike ibugharị
Ị chọrọ ịzụta ebe oyi oyi na-atụ laptọọpụ kacha mma? Tinye akwụkwọ ntuziaka ịzụ ahịa anyị wee họrọ nke ga-eme ka laptọọpụ gị dị jụụ na obere okpomọkụ. Mee ka ndụ kọmputa gị dị jụụ zuru oke site na ntọala ndị a jụrụ oyi.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma neoprene laptop sleeve ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, anyị atụnyere ndị kasị mma ịchọta nke zuru okè dị ka size.
Ahụigodo ikuku na òké
Anyị ahụla ahụigodo na òké ikuku kacha mma dị ọnụ ala n'ahịa site n'ịtụle ụdị Bluetooth ndị kacha ere na ndị ọrụ kwadoro.
Akpa azụ Laptọọpụ
Anyị na-atụnyere obere akpa laptọọpụ kacha mma ka e wee chebe kọmpụta gị ka ọ ghara ịdaba. Kedu nhọrọ kacha mma?
Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu siri ike tụlee itinye ego na otu n'ime ahụigodo egwuregwu ndị a. Anyị ahọrọla ọnụahịa kacha mma na ntụnyere a
Anyị ahụla ahụigodo ikuku kacha mma maka ọnọdụ ọ bụla na ntụnyere a. Ma ọnụ ala na uru ka mma maka ego.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta òké egwuregwu, tụlee oke ọnụ ahịa kacha mma nke anyị tụrụ aro na ntụnyere a mgbe ịnwale ha.